Jesosy, ilay fanekena tanteraka - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02 > Jesosy, ilay fanekena tanteraka
Iray amin'ireo adihevitra tsy miovaova indrindra eo amin'ireo manampahaizana ara-pinoana ny: "Iza amin'ireo lalàna ao amin'ny Testamenta Taloha no nofoanana ary faritra inona no mbola tokony hotandremantsika?" Ny valin'io fanontaniana io dia tsy "na". Avelao hanazava aho.
Ny lalàna federaly taloha dia fonosana feno 613 lalàna momba ny sivily sy ara-pivavahana ho an'ny Isiraely. Natao hampisarahana azy ireo amin'izao tontolo izao sy hametrahana fototra ara-panahy izay mitondra any amin'ny finoana an'i Kristy. Izy io, araka ny lazain'ny Testamenta Vaovao, alokaloka ny zava-misy ho avy. Jesosy Kristy, ny Mesia, dia nahatanteraka ny lalàna.
Tsy manaiky ny Lalàn’i Mosesy ny Kristianina. Eo ambanin’ny lalàn’i Kristy kosa izy ireo, izay aseho amin’ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny mpiara-belona. “Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo, mba hifankatiavanareo kosa” (Jaona 1.3,34).
Nandritra ny asa fanompoany teto an-tany, Jesosy dia nandinika ireo fombafomba sy fombafomba fanaon'ny vahoaka jiosy, saingy nitahiry azy ireo mora foana izay matetika no gaga na dia ny mpanara-dia azy aza. Ohatra, nahatezitra ny mpitondra ara-pivavahana tamin'ny fomba nitondrany ny fitsipika hentitra nataony tamin'ny fitandremana ny Sabata. Rehefa notsaraina izy dia nanambara fa Tompon'ny Sabata Izy.
Tsy lany andro ny Testamenta Taloha; izy io dia ampahany amin'ny Soratra Masina. Ao ny fitohizan ny sitrapo roa. Azontsika atao ny manome fa ny fanekena nataon'Andriamanitra dia nomena tamin'ny endrika roa: fampanantenana sy fahatanterahany. Miaina eo ambanin'ny fanekena tanteraka nataon'i Kristy isika izao. Misokatra ho an'izay rehetra mino azy ho Tompo sy Mpanavotra. Tsy voatery ho ratsy ny manaraka ny lalàn'ny Fanekem-pihavanana Taloha, izay mifandraika amin'ireo karazana endrika fiankohofana sy ny fomba fanao raha tianao. Nefa ny fanaovana izany dia tsy mahatonga anao ho marina kokoa na ankasitrahan'Andriamanitra mihoatra noho ireo tsy ... Afaka mankafy ny tena "fitsaharana ny Sabata" ny Kristiana - ny fahafahana amin'ny ota, ny fahafatesana, ny faharatsiana ary ny fisarahana amin'Andriamanitra - amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy.
Midika izany fa ny adidy ananantsika dia adidin'ny fahasoavana, fomba fiainana, ary ao anatin'ny fampanantenan'ny fanekena sy ny fahatokiany. Izany fankatoavana rehetra izany dia ny fankatoavana ny finoana, ny fahatokisana an 'Andriamanitra, mba ho marina amin'ny teniny ary ho marina amin'ny lalany rehetra. Ny fankatoavantsika dia tsy natao hanomezana endrika an'Andriamanitra fotsiny. Tsara fanahy izy ary maniry ny hiaina amin'ny fomba izay hahazoantsika ny fahasoavany izay omena antsika isan'andro amin'i Jesosy Kristy.
Raha miankina amin'ny fanatanterahana ny lalàna ny famonjena anao, dia ho resy ianao ka tsy hahomby. Saingy afaka misaotra azy ianao, mizara aminao ny fiainany feno i Jesosy amin'ny herin'ny fanahiny.